पहिलो चरणको चुनाव मतदान ६५ प्रतिशतभन्दा बढी
काठमाडौंँ, मङ्सिर ११ गते । पहिलो चरणमा ३२ जिल्लाका प्रतिनिधि सभातर्फ ३७ र प्रदेश सभातर्फ ७४ निर्वाचन क्षेत्रका लागि आइतबार मतदान भएको छ । पहिलो चरणमा समग्रमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी मतदान भएको निर्वाचन आयोगले आइतबार जानकारी दिएको छ । पहिलो चरणमा ७०२ जना उम्मेदवार चुनावी मैदानमा थिए ।
आयोगले साँझ पत्रकार सम्मेलन गरी निर्वाचन शान्तिपूर्ण, उत्साहजनक र मतदाताको व्यापक सहभागितामा सम्पन्न भएको जनाएको छ । सबैभन्दा बढी बाजुरामा ८० प्रतिशत मतदान भएको छ । पहिलो चरणमा कुल चार हजार ४६३ मतदान केन्द्रमा निर्वाचन भए पनि जम्मा दुई निर्वाचन केन्द्रको मतदान स्थगित भएको छ ।
आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यावदका अनुसार रूकुम पश्चिमको बाफिकोट गाउँपालिका ५, रत्न मावि (क) मतदान केन्द्र र सोही जिल्लाको आठ बीसकोट न.पा. ११ स्थित राष्ट्रिय मावि गत्तसैना (ख) मतदान केन्द्रमा मतपेटिकामा केही समूहले आगजनी गरेपछि मतदान स्थगित भएको हो । यी दुवै ठाउँमा चाँडै पुनः मतदानको व्यवस्था मिलाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
मतदानमा उत्साहजनकरूपमा भएको सहभागिताबाट संविधानको कार्यान्वयन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत र राजनीतिक स्थायित्वका लागि नेपाली जनता प्रतिबद्ध रहेको पुष्टि भएको प्रमुख आयुक्त यावदले बताउनुभयो । उहाँले मतदानमा भएको जनताको उत्साहजनक सहभागिताको आयोगले उच्च सम्मान गर्ने समेत बताउनुभयो ।
मतदान सम्पन्न भएपछि सबै मतपेटिका सुरक्षित ढङ्गबाट जिल्ला सदरमुकामस्थित मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा सङ्कलनको काम भइरहेको बताउँदै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले सङ्कलन भएका मतपेटिका मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृतको प्रत्यक्ष रेखदेख, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा रहने बताउनुभयो ।
मतपेटिकालाई मुख्य निर्वाचन अधिकृतसहित सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि तथा उम्मेदवारको सहमतिमा विश्वसनीय ढङ्गबाट सुरक्षित स्थानमा राखिने हुनाले विश्वस्त रहन उहाँले सबैमा आग्रह गर्नुभयो । दोस्रो चरणको निर्वाचन मङ्सिर २१ गते सम्पन्न भए लगत्तै सोही साँझबाट मतगणनाको काम सुरू हुने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
मतदानका क्रममा केही छिटफुट र सामान्य घटनाबाहेक सबै ठाउँमा शान्तिपूर्ण रूपले निर्वाचन सम्पन्न भएको भन्दै आयोगले सरकारले गरेको सुरक्षा प्रबन्ध प्रभावकारी भएको जनाएको छ । निर्वाचन सम्पन्न गराउन खटिएका राष्ट्रसेवक कर्मचारीको आयोगले उच्च प्रसंशासमेत गरेको छ ।
‘निर्वाचन सफल पार्न अहम भूमिका खेल्ने सबै राजनीतिक दल, उम्मेदवार, दलका कार्यकर्ता र उहाँहरूले देखाउनुभएको सहयोग, सदभाव, मैत्रीपूर्ण व्यवहार, समझदारी र सकारात्मक सहभागिताप्रति आयोगले आभारसमेत प्रकट गरेको आयोगद्वारा आइतबार जारी विज्ञप्तिमा छ ।
निर्वाचनमा सघाउने मित्रराष्ट्र, दातृ निकाय, विकास साझेदार संस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, पर्यवेक्षक, नागरिक समाज, मतदाता, सञ्चारकर्मी सबैलाई आयोगले धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । पहिलो चरणको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि अब आयोगको सबै ध्यान मङ्सिर २१ गते हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनमा केन्द्रित हुने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले बताउनुभयो ।
दोस्रो चरणको निर्वाचनमा समेत सकारात्मक सहयोग र व्यवहारको अपेक्षा आयोगले सबैबाट गरेको उहाँले बताउनुभयो । आइतबार पहिलो चरणमा बिहान ७ बजेदेखि साँझ ५ बजेसम्म मतदानको समय कायम गरिएको थियो । दोस्रो चरणमा मङ्सिर २१ गते ४५ जिल्लामा मतदान हुनेछ ।
यसअघि स्थानीय तहमा मुलुकभर करिब ७३ प्रतिशत बढी मतदान भएको थियो । चिसो र प्राकृतिक प्रतिकुलताका कारण आशा गरेअनुसार मतदान हुन नसकेको बुझाइ निर्वाचन आयोगको छ । आयोगले दिएको प्रारम्भिक अनुमान ६५ प्रतिशत भए पनि त्यसको प्रतिशत अझै बढ्न सक्ने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादवले बताउनुभयो ।